आज २०७७ साल मंसिर १५ गते सोमबारको राशिफल - संदेश पत्र
आज: २०७७ माघ ४, आईतबार
पाँचखालमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक दिवाकरको मृत्यु
अमेरिका पठाउँछु भन्दै लाखौं ठग्ने युवती पक्राउ
पोर्चुगलमा बझाङका एक नेपालीले गरे आत्महत्या
सुनको जलप लगाएको ‘फलाम’को गहना: सुन पसलमा राखेर ठगी
उपत्यकामा आँखा पोल्ने प्रदूषण, घर बाहिर ननिस्किन विज्ञको सुझाब
गायक शिव परियारको स्वरमा ‘तिम्रो याद भुलाउन’ बोलको गीत सार्वजनिक
पत्नी सीताको उपचार गर्न सोमबार भारत जाँदै प्रचण्ड
१पाँचखालमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक दिवाकरको मृत्यु
२अमेरिका पठाउँछु भन्दै लाखौं ठग्ने युवती पक्राउ
३पोर्चुगलमा बझाङका एक नेपालीले गरे आत्महत्या
४सुनको जलप लगाएको ‘फलाम’को गहना: सुन पसलमा राखेर ठगी
५उपत्यकामा आँखा पोल्ने प्रदूषण, घर बाहिर ननिस्किन विज्ञको सुझाब
६नेपाली सेनामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग (सूचनासहित)
७गायक शिव परियारको स्वरमा ‘तिम्रो याद भुलाउन’ बोलको गीत सार्वजनिक
८देशभर मौसम बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना
२०७७ मंसिर १५, सोमबार (१ महिना अघि)
आज २०७७ साल मंसिर १५ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
सानाे प्रयासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। आगन्तुकहरूकाेे उपहारले प्रसन्नता मिल्नेछ। कामले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। पछिका लागि कर्मफल सञ्चय गर्ने समय छ। मेहनतले अवसर दिलाउनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ।
चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवेकले काम गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ। धेरै सक्रियता स्वास्थ्यका लागि बाधक बन्न सक्छ।
पाथिभरा माताको दर्शनगरी मंसिर १६ गते मंगलवारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज २०७७ असोज २८ गते बुधबारको राशिफल